Eme na-elu maka mr blue-agba aja aja anya
ị bụ ebe a: Home ihu Ọgwụ Eme na-elu maka mr blue-agba aja aja anya
Brown anya na ìhè eke agba nke ntutu - ọ bụ a ụkọ na-adịghị ahụkebe. Ọ bụ ya mere etemeete n'ihi na mr blue-agba aja aja anya ji ụfọdụ pụrụ iche atụmatụ, ma, n'ihi ya niile strangeness ya enye gị ohere ike kpamkpam dị iche iche ma ikpọ oyiyi, n'ihi na ihe atụ, maa mma image of Marilyn Monroe, echesinụ azụmahịa nwaanyị, emenye ihere schoolgirl, fun party girl, imewe ihe enupu isi, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ndị isi ihe na nke a - ịhọrọ nri na agba palette, nke ga-kwekọrọ hazel anya na blond ntutu agba.
Atụmatụ etemeete n'ihi na aja aja-eyed mr blue
Malite na ihe ndị bụ isi, ya bụ, na ala nke anụ ahụ. curls mr blue, karịsịa mgbe platinum ndo, ihe ziri ezi otú ìhè, otú, ada ada ihu, Ìhè anyanwụ na-egosi ihe ọbụna n'onye kasị nta ezughị okè. N'otu oge ahụ iche na agba na ntutu aja aja anya, n'ozuzu, a mata niile wrinkles na akpụkpọ dị, pụta ìhè na ọchịchịrị tụrụ n'okpuru lids na ndị ọzọ na ọghọm dị blond beauties.
Otú ọ dị, na ike a nile pụrụ imeri na-enyemaka nke ọma họrọ proofreaders na tonal ego. A na-achọ ịma, na-ekwekọghị n'okike ọkụ na oyi na-atụ icha mmirimmiri akpụkpọ-aj u anya ọzọ nke ọma, na anwụ na - ekpo ọkụ shades, ike n'ụzọ dị irè mesie eke anya omimi. Agbali chọta a n'etiti ala n'etiti ọkụ na oyi na-atụ hues, n'ozuzu, ịkpata a na-adịghị mma n'ihi.
Ọzọkwa, echefula, na ude isi na agba kwesịrị dị ka nso eke akpụkpọ ụda. Ị nwere ike iji a ndabere nke otu unit Mkpa ọkụ akpụkpọ, ma ọ bụghị ihe karịrị, darker-na na onye ọ bụla ndo, Ọ bụ na-ahọrọ ntọala, nke ga-erughị akpụkpọ ụda, ma ọ dị mkpa ka mee iji na-agbazi ebe n'okpuru anya.
nri etemeete n'ihi na mr blue-agba aja aja anya - A Nchikota peach, chocolate, kọfị, nakwa dị ka ájá na agba aja aja shades. Ime ka ọtụtụ expressive anya na ọhụrụ, gị mkpa iji ọtụtụ ìhè shades, N'imesi akara uto nke nku anya onyinyo a ole na ole shades darker. Nke a ga-akwa ndudue iji na-erite oroma ma ọ bụ acha shades nke onyinyo, nke na-enye anya ike gwụrụ na-arịa ọrịa. Nnwale na ndị ọzọ niile shades pụrụ nnọọ mma.
Eme na-elu maka mr blue
Makeup maka ọchịchịrị n'anya.
Makeup maka anya agba aja aja
Atiya: ihu Ọgwụ